घाइते रोनाल्डो कहिले ठिक होलान् ?
एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय खेलको क्रममा घाइते भएका पोर्चुगलका खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डो यतिखेर चोटको कारण मैदानबाहिर रहेका छन् । बार्सिलोनामा उपचार गरेका रोनाल्डोको चोट गम्भीर प्रकृतिको नभए पनि उनी कहिले खेलमा फर्कन्छन् भन्ने कुराको टुंगो लागेको छैन ।
गोल्डेन बुट रेसमा मेसी अघिअघि, एम्बाप्पे पछिपछि
काठमाडौँ । शनिबार राति सम्पन्न स्पेनिस घरेलु लिग ला लिगा अन्तर्गतको खेलमा बार्सिलोनाका खेलाडी लियोनल मेसीले इस्प्यानियोलविरुद्ध दुई गोल गरे । यससँगै मेसीले घरेलु लिगमा व्यक्तिगत गोलसंख्या ३१ बनाएका छन् । यससँगै ‘गोल्डेन बुट ब्याटल’मा मेसी अझै बलियो बनेका छन् ।
बङ्गलादेशका हसनलाई पछि पार्दै सन्दीप बने सर्वाधिक विकेट लिने स्पिनर
काठमाडौँ । नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने सन् २०१९ मा सर्वाधिक विकेट लिने स्पिनर बनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)का अनुसार सन् २०१९ को जनवरीदेखि अप्रिल १ सम्म सन्दीपले २७ विकेट लिँदै पाकिस्तानका पूर्वकप्तान शाहिद अफ्रिदी, अफ्गानिस्तानका राशिद खान, बङ्गलादेशका सकिब अल हसनलाई पछि पारेका हुन् । सन् २०१९ मा अफ्रिदीले २६, राशिद २५ र सकिबले २४ विकेट लिएका छन् ।
मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएपछि श्रीलङ्काका क्रिकेट क्याप्टेन तनाबमा
कोलम्बो । श्रीलङ्काको टेष्ट क्रिकेट टिमका क्याप्टेन दिमुथ करुणरत्नेले सोमबार प्रहरीसँग क्षमायाचना गरेका छन् ।
इण्डियन प्रीमियर लिगः किङ्ग्स इलेभन पन्जाबद्वारा दिल्ली १४ रनले पराजित
काठमाडौं । १२औं सिजनको ईण्डियन प्रीमियर लिगमा पञ्जाबका सेम कुरानले जबर्जस्त बलिङ गर्दा दिल्ली क्यापिटल्स १४ रनले पराजित भएको छ । सोमबार आईएस बिन्द्रा क्रिकेट मैदान मोहाली, चण्डिगडमा भएको खेलमा पन्जाबले दिल्ली माथी १४ रनको उत्कृष्ट जित निकालेको हो ।
के आर्सनलले यी पाँच खेलाडीलाई समरमा बेच्ला ?
काठमाडौँ । इंग्लिस क्लब आसर्नल जारी प्रिमियर लिगमा ‘टप फोर’ स्थान छनोट गर्नको लागि संघर्ष गरिरहेको छ । आर्सिनी वेङ्गरपछि युनाइ एम्रीले टिमलाई सम्हालिरहेका छन् ।
रोनाल्डोबीनाको युभेन्ट्स विजयी, उपाधिबाट १३ अंक पर नजिक
काठमाडौँ । इटालियन घरेलु लिग सेरिया एको उपाधिबाट युभेन्ट्स १३ अंकले मात्रै पर रहेका छन् । शनिबार राति सम्पन्न खेलमा पनि जित निकालेसँगै युभेन्ट्स उपाधि नजिक पुगेको हो ।
मेसीले विपक्षीलाई पागल बनाउँछन्ः भालभर्दे
काठमाडौँ । स्पेनिस घरेलु लिग ला लिगा अन्तर्गत शनिबार राति सम्पन्न खेलमा बार्सिलोनाले घरेलु प्रतिद्धन्द्धी इस्प्यानियोललाई २–० गोलले पराजित गर्यो । खेलमा बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेसीले दुई गोल गरे ।
इन्डियन प्रिमियर लिगः सुपर ओभरमा दिल्लीको शान्दार जित
काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा दिल्ली क्यापिटलले जित हात पारेको छ । शनिबार राति भएको खेलमा कोलकाता नाइट राईडर्सलाई सुपर ओभरमा पराजित गर्न सफल भएको छ ।